ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် – This X-mas | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Entertainment » ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် – This X-mas	19
ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် – This X-mas
Posted by ဇီဇီ on Dec 26, 2014 in Entertainment, My Dear Diary, Photography | 19 comments
ဒီနှစ် အော့ချာ့ ကို ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ဘူးး…
Gardens By the Bay ကို ၂ ခေါက်သွားတယ်။ ဟို ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ အတွင်းထဲထိ မဝင်တော့ဘူးး။
အပြင်က သစ်ပင်ပုံစံ အဆောက်အဦးတွေ မီးထွန်းတာ လှတယ်ဆိုလို့ သွားကြည့်တာ။
လူကလည်း အရမ်းများတယ်။ အဲဒီနေရာကဖရီးဆိုတော့ ကွကိုယ် ရေတစ်ဘူးနဲ့ မုန့်နဲ့ ၈ နာရီတစ်ခါ ထွန်းမဲ့ မီးကို ထိုင်စောင့်နေတာ။
စောင့်ရတဲ့ အချိန်ကုန်မှန်းမသိ မွသဲနဲ့လည်း ချက်နေသေးတာဆိုတော့ မီးတွေ အားလုံး မှောင်သွားပြီး သီချင်းသံ စတော့ မှ ဘာလဲပေါ့။
အဲဒီ အဆောက်အဦးခြေရင်းမှာ စပီကာတွေနဲ့ ပတ်လည်ဆိုတော့ အတော်ကျယ်တယ်။
အဲဒါနဲ့ ဘေးဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူများတွေက အဲဒီ ကျောက်ခုံပေါ်မှာပက်လက်လေးတွေ။
ဪ။ သူတို့က အတွေ့အကြုံများသဟဲ့။ လိုက်လုပ်မှ ဆိုပြီး ကင်မလာလေးချိန်ရက်နဲ့ အိတ်ပေါ် ခေါင်းအုန်းပြီး လှဲအိပ်လိုက်တယ်။
ခရစ်စမတ် သီချင်းတွေနဲ့ မီးရောင်တွေ ကစားသွားတာကို ……..
အောက်က ကျောက်ခုံတွေကနေ ပက်လက်လေးတွေ အိပ်ပြီး ကြည့်ရတာ။
အသံ နည်းပညာရယ်၊ လျှပ်စစ်မီးရယ်ကို ကစားသွားတာရယ် ပေါင်းလိုက်တော့….
ကိုယ်တိုင် ဒစ်စနေက ရိုက်တဲ့ ကာတွန်းအယ်နီမေးရှင်း မူဗီတွေထဲ ရောက်သွားသလို ခံစားရလို့။ နောက် ၉ နာရီ တစ်ခေါက်ကို ဓာတ်ပုံမရိုက်တော့ ပဲ အပြည့်အဝ ခံစားခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒစ်စနေးလန်းထဲက မင်းသမီးလို့ အထင်ရောက်လို့ ကောင်းလို့။
Kaung Kin Pyar says: နေပြည်တော်က ရေပန်းဥယျာဉ်လဲ အိုက်အတိုင်းပဲ…..
ခင်ဇော် says: မရောက်ဖူးတော့ မသိဘူးတော့။
ခင် ခ says: ခရစ်ယာန်ဘာသာသက်ဝင်ယုံကြည်ကြကုန်သော ရွာသူသားများကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးကာ စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေ။
sorrow says: -သာဓု..သာဓု သာဓု ပါဗျာ..ဘုရားသခင်လဲ တူတူရှိပါစေ …
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: လှလိုက်ထာဗျာ…
ကိုယ်တိုင်သွားပြီး…ငေးမော့ကြည့်ချင်လာတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကြိုက်တတ်ရင်တော့ လှတယ်ထင်သကွဲ့။
မြန်မာ မုန့်ဈေးတန်းတော့ လွမ်းသားးး
မြစပဲရိုး says: WHAM! LYRICS
“Last Christmas” [Chorus (2x):]
ဒါကတော့ L ခွန်းရီ ဆိုတာ။ lol:-))
ဒီမှာတော့ မီးရောင်ကြည့်ဖို့ထက် အစား ကိုများ ပိုသန်ကြလားမသိ။
Christmas Dinner က ပိုအရေးပါသလိုဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဟုတ်။။
မီးထွန်းတဲ့ သီချင်းထဲမှာလည်း ဒီ သီချင်းပါတယ်။
ကျနော်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းထဲမှာလည်း ဒီ သီချင်းပါပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်ကို စဉ်းစားလိုက်တော့ ဒီ သီချင်းကို သတိရပြီး ဆင်တူရိုးမှားပေးတာပါ။
သများကတော့ မီးရောင်အောက်ကို ဝင်မိပါတယ်။
ဦးကျောက်ခဲ says: တောက်စ် … Wham! – Last Christmas Lyrics. လေးဆိုပြမို့ အရီးဦးသွားပြီ..
ကျောက်စ်တို့တော့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီး ကြက်ပေါင်း နို့ခေါက်ဆွဲချက်စားတယ်…
ကောင်းမှ… ကောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဟွန့်။
အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးနဲ့စားနေတဲ့ ၂ ယောက်။။
kai says: ခရစ်ကို စမတ်…တာ.. လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာ.
ဒီနှစ်…ခရီသွားဖြစ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ၂၀၁၄ အစ်(စ) တဂျီး ခရီးသွားနှစ်။.
manawphyulay says: ခရစ်စမတ်အလှကို ခံစားပြီးပြန်တော့ နယူးရီးယားအလှကို စောင့်လို့ တဖန် နေပြန်ပေါ့….
ခင်ဇော် says: ဒီနှစ် နယူးရီးယားက စလုံးမှာ စည်မှာ။
၂၀၁၅ က သူတို့ နှစ် ၅၀ ပြည့် နိုင်ငံတော်ပွဲတွေရှိတယ်။
La Yeik says: နယူးရီးယားလည်း ပုံလေးတွေတင်ပေးပါအူး မမဂျီး…ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုကို ခံစားရတဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချက်လေးများကို စောင့်မျှော်လျှက်ပါ….
ခင်ဇော် says: ခိခိ။
နရူးရီးယားတော့ ကြောက်ရို့ ဘယ်မှာ မသွားပဲ အိမ်မှာပဲ သောက် (အဲလေ) အိမ်မှာပဲ နေမလားလို့။
kyeemite says: .လှပါပေ့ဗျား…ရန်ကုန်မှာတော့ ခရစ္စမတ် သိပ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမတွေ့မိ…သီချင်းသံတောင်သိပ်မကြားလိုက်ဘု
.နယူးရီးယားလည်း ဒီလိုပဲတိတ်တဆိပ်ပြီးသွားမယ်ထင်မိတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အသေအပျောက်နည်းနည်းနဲ့ နှစ်ကူးရင်ကို မဆိုးပါဘူးလေ
လုံမလေးမွန်မွန် says: တစ်ခါလောက် လာလည်ချင်မိတယ်ဆို.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.